आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेटः थाइल्यान्डसँग नेपाल पराजित - VOICE OF NEPAL
आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेटः थाइल्यान्डसँग नेपाल पराजित
९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार १३:३३ 125 ??? ???????
काठमाडौं– आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसिया छनोटको दोस्रो खेलमा नेपाल आयोजक थाईल्यान्डसँग ५७ रनले पराजित भएको छ । बिहिबार भएको खेलमा १ सय २५ रनको लक्ष्य पच्छ्याएको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा आठ विकेट गुमाएर ६७ रनमा समेटिएको थियो ।
नेपालकी इन्दु बर्माले ३२ र सरिता रानामगरले १८ रन बनाए । अन्य खेलाडीले दोहोरो अंकको रन जोड्न सकेनन् । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको थाइल्यान्डले २० ओभरमा सात विकेटको क्षतिमा एक सय २४ रन बनाएको थियो । थाइल्यान्डका लागि चानिदा सिथुरुवाङले सर्वाधिक ३५ रन जोडिन् । नारुमोल चाईमाईले ३२ र वाङपाका लिङप्रार्सटले अविजित २८ रन बनाए । नटया बोचाथामले १२ रन बनाईन ।
बलिङमा नेपालकी नेरी थापा र कृष्णा कुवरले दुई दुई विकेट लिए । कप्तान रुबिना क्षेत्री र करुणा भण्डारीले एक एक विकेट झारेका थिए । यस हारले विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा पुग्ने नेपालको सम्भावना कमजोर बनेको छ । जितसँगै थाईल्याण्डले दुई खेलमा चार अंक बनाएको छ । नेपालको दुई अंक छ । पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियालाई हराएको थियो ।
एसिया छनोटमा नेपालसहित थाइल्यान्ड, युएई, मलेसिया, कुवेत, चीन र हङकङ सहभागी छन् । राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने छनोट खेलको बिजेताले आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप र एकदिवसीय विश्वकपमा छनोट हुनेछ ।
रोनाल्डोलाई ‘प्लेयर अफ द सिजन’ अवार्ड !
लगातार सातौं पटक बार्यन म्युनिख बन्यो च्याम्पियन
रियल मड्रिडले नेयमारलाई २०० मिलियन युरोमा किन्दै !
सन्दीपसंगै चार नेपाली क्रिकेटर सिपिएल २०१९ को ड्राफ्टमा
नेपालमा हुने १३ औं साग खेलकुदको प्रतीक चिन्ह लोगो सार्वजनिक
रिङभित्रै रेस्लरको मृत्यु
दिल्ली २ विकेटले विजयी, हैदरावाद बाहिरीयो